कानून | इनाम पुरस्कार - प्रेम, यौन र इन्टरनेट
टेक्नोलोजीले कुनै पनि बच्चा सहित कुनै स्मार्टफोनको साथमा उपलब्ध यौन संवर्धन तस्बिरहरू सिर्जना र प्रसारण गर्दछ। यौन अपराध र रिपोर्टिङमा वृद्धि प्रहरी र अभियोजन सेवा द्वारा 'शून्य सहनशीलता' दृष्टिकोणको परिणामस्वरूप अभियोगको रेकर्ड संख्याको परिणामस्वरूप। बालबालिका यौन दुर्व्यवहार विशेष गरी उच्च छ।
प्रेम, यौन, इन्टरनेट र कानून जटिल तरिकामा अन्तरक्रिया गर्न सक्दछ। इनाम फाउन्डेसनले तपाइँलाई तपाईंको परिवार र तपाईंको परिवारको लागि के अर्थ बुझ्न मद्दत गर्न सक्छ।
यूकेमा, बच्चाहरु को यौन उत्तेजना छविहरु (एक व्यक्ति को 18 वर्ष अन्तर्गत) यौन अपराध संग चार्ज गर्न सकिन्छ। यो स्पेक्ट्रमको एक अन्तमा समावेश गर्दछ, वयस्कहरू बच्चाहरु संग यौन सम्पर्क खोज्न को लागी माछाहरु मार्फत नगरी वा अर्का नग्न 'आत्मिक' लाई सम्भावित प्रेम रुचिहरु, र त्यस्ता तस्विरहरुको स्वामित्वमा पठाउन उत्प्रेरित गर्दछन।
हाम्रो फोकस बेलायतीमा कानुनी परिस्थितिमा छ, तर धेरै देशहरूमा समस्याहरू समान छन्। यस साइटलाई सुरूवात बिन्दुको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्।
यस खण्डमा इवार्ड फाउण्डेशनले निम्न मुद्दाहरू अन्वेषण गर्दछ:
• प्रेम, यौन, इन्टरनेट र कानून
• ब्रिटेनमा उमेर प्रमाणिकरण
• सहमतिको उमेर
• कानूनमा के हो?
• सहमति र किशोरीहरू
• व्यवहारमा के हो?
• स्कटल्याण्डको कानून अन्तर्गत झिक्दै
• इङ्गल्याण्ड र वेल्सको कानून अन्तर्गत जम्मा
• Sexting कसले गर्छ?
• यौन अपराधमा वृद्धि
• Webcam Webcam